Ciidamada Badda Puntland oo soo bandhigay hubkii ay ku qabteen Xeebta magaalada Boosaaso(Sawirro)
Posted on September 23, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Boosaaso(RBC Radio) Ciidamada Badda dowladda Puntland ee PMPF ayaa magaalada Boosaaso maanta kusoo bandhigay qeyb kamid ah hub si sharci darro ah la doonayey in lagu soo geliyo gudaha Puntland. Hubkan ay ciidamadu qabteen ay saarnaa laash nooca shabaxa ah ,waxaana la qabtay xili xalay laga dejinayey xeebka magaalada Boosaaso. Gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Xasan […]
Posted on September 21, 2017 Wararka
Muqdisho(RBC Radio) Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dawladda dhexe iyo Dawlad Goboleedyada oo seddexdii bilba mar la qabto, shirkan oo ay soo qabanqabisay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qaybgalay dhamaan Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee D/Goboleedyada. Shirkan oo socon doona labo maalin ayaa […]
Qaar kamid ah bulshada ku dhaqan Boosaaso oo ka digay in la dumiyo xaafadaha taariikhiga ah ee magaalada(Sawirro)
Posted on September 20, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Boosaaso(RBC Radio) Waxaa shir isugu yimid dadka degan xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada Boosaaso ,waxayna si mideysan uga hadleen heshiiskii dekeda Boosaaso muddo 30 sano ah lagu wareejiyey shirkadda P&P Port ee dalka Imaaraatka carabta iyo qorshaha dowladda ee duminta dhismayaasha taariikhiga ah ee ku yaalla xaafadaha ku dhow dhow dekeda Boosaaso. Shirkan ayaa waxaa […]
Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka badda Puntland oo mamnuucday qabashada Libaax-badeedka
Boosaaso(RBC Radio) Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowladda Puntland ayaa maanta soo saartay amar ay ku mamnuucayso qabashada Libaaxa indho-buurka iyo isticmaalka shabaagta caaga ah. Mas’uuliyiinta Wasaaradda ayaa warbaahinta maanta u qeybiyey digreeto ay ku mamnuucayaan Libaax-badeedka ,waxayna u qorneyd qaabkan Hoose: Ku: dhammaan shirkadaha qalabka kalluumeysiga. Ku:Dhammaan dalladaha iyo ururada kalluumeysiga. Ku: Taliska ciidanka […]
Madaxweynaha Jubbaland oo booqday Mashruuca waraabka Beeraha Gobolka Gedo (SAWIRRO)
Kismaayo(RBC Radio) Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Mashruuca waraabka Beeraha Gobolka Gedo ee fadal kaas oo heer gabo gabo ah maraya. Madaxweynaha oo xubno katirsan Xukuumada ay wehelinayaan waxaa uu lug kusoo maray dhamaan qaybaha Mashruuca oo biyaha wabiga Jubba lagu gaarsiinayo dhulka fog ee baadiyaha ah oo loogu […]
Ciidanka Xoogga Puntland oo Wajigii Labaad ee Dhirayn ah ka bilaabay magaalada Qardho(Sawirro)
Posted on September 15, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Boosaaso(RBC Radio) Ciidamada Xoogga Puntland ee PSF ayaa ka bilaabay magaalada Qardho wajigii labaad ee lagu dhiraynayo Waddooyinka magaalada . Ciidamada ayaa isu xil-saaray iney dhireeyaan magaalooyinka Puntland ,kaasoo uu hormuud u yahay Agaasimaha guud ee PSF Gen. Asad Cismaan Cabdullaahi(Diyaano). Maamulka gobolka,kan degmada Qardho,saraakiisha ciidamada xoogga Puntland iyo kuwa gobolka Karkaar ayaa ka qeybgalay […]
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo gaaray magaalada Boosaaso(Sawirro)
Boosaaso(RBC Radio) Madaxweyna Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 15 September 2017 dalka dib ugu soo laabtay, kadib gudashada rukniga diiniga ah ee Xajka. Madaxweynaha iyo weftigiisa oo kaso degey magaalada Boosaaso ayaa waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaaladaasi, maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso, […]
Ciidamada Amniga magaalada Boosaaso oo qabtay Maandooriye (Sawirro)
Posted on September 10, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Boosaaso(RBC Radio) Ciidamada amniga magaalada Boosaaso ayaa maanta Warbaahinta usoo bandhigay maandooriye lagu qabtay kantaroolka magaalada. Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay Raggii waday iyo maandooriyahan oo la sheegay in uu dhan yahay 2 kiilo iyo shaqsiyaadkii waday. Guddoomiyaha gobolka Bari iyo Taliyaha qeybta Booliska ayaa goobjoog ka ahaa goobta lagu soo bandhigay maandooriyahan. […]
Xog: Xildhibaan Zakariye oo shirqool loogu maleegayo Caasimada Soomaaliya ee Mogadishu.
Posted on September 8, 2017 RBC, Wararka
RBC Mogadishu: Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta Raxanreeb.com ayaa sheegaya Xildhibaan Zakariye Xaaji Maxamuud loo maleegayo shirqool loogu talagalayo in lagu dilo. Xogtaan oo ay Warbaahinta Raxanreeb ka heshay dhanka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegayaa shirqolkaan uu hada sirdoonka dowlada Itoobiya uu u marayo meel gabogabo ah. Xildhibaan Zakariye Xaaji Maxamuud […]
Gollaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta Ansixiyey Hindise Sharciyeedka Batroolka(Sawirro)
Posted on September 7, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga, ansixinta Hindise Sharciyeedka Batrooka, Heshiiska isu-celinta maxaabiista ee India iyo Soomaaliya iyo arrimo kale. Wasiirka Amniga ayaa golaha siiyey warbixin dhanka amniga […]
Wasiirka Cusub ee Maaliyadda Puntland iyo Ganacsatada gobolka Nugaal oo kawada hadlay Sidii xal loogu heli lahaa Shilling Soomaaliga(Sawirro)
Posted on September 6, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Garoowe(RBC Radio) Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Dowlada Puntland ee magaaladda Garowe waxaa lagu qabtay maanta kulan muhiim ah oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatadda Lacagta shilinka Soomaliga ah. Kulankan oo dhinacyo badan taabanyay aya waxaa shir gudoominayey Wasiirka Maaliyadda Puntland Mudane Cabdullaahi Saciid Axmed Carshe. Waxaana kulanka ka qeybgalay dhinacyada ganactsada ku dhaqan […]
Hay’adda Bisha Cas ee dalka Imaaraatka Carabta oo hilib u qeybisay Qoysas danyar ah(Sawirro)
Posted on September 2, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Boosaaso(RBC Radio) Hay’adda samafalka bisha cas ee Imaaraatka carabta ayaa deeq hilib u ah u qeybisay kun qoys oo danyar ah gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dadka ay hilibka u qeybisay ayaa ah dad danyar ,kuwa qaba baahiyaha gaarka ah,xarumaha lagu xanaaneeyo carruurta Agoonta ah iyo saldhigyada iyo xabsiyada Boosaaso. Hay’adda bisha cas […]
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo la kulmay Danjiraha Midowga Yurub ee Bariga Africa
Posted on August 26, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho(RBC Radio) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa maanta la kulmay Danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Barigga Africa, Alexandar Rondos iyo wafdi uu hoggaaminayo, waxayna ka wada hadleen howlaha ay midowga Yurub ka wadaan Soomaaliya iyo sidii loo dar-dargalin lahaa. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa […]
Wasiirka Arrimaha Dastuurka Soomaaliya oo la kulmay Madax ka socotay UNDP iyo UNSON(Sawirro)
Posted on August 23, 2017 RBC, Sawiro, Wararka
Muqdisho(RBC Radio) Masuuliyiinta Sare ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu ugu horeeyo Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, Wasiir Ku-Xigeenka Mudane Xuseen Cilmi, iyo Agaasimaha Guud Maxamed Abuukar Zubeeyr ayaa xarunta Wasaaradda kula kulmay Nahida Hussein, Hastings, iyo Hassan Ebrahim oo ka kala socday UNDP Soomaaliya iyo UNSOM. Kulanka ayaa looga hadlay hawlaha […]
Xildhibaanada Baarlamaanka Aqalka sare oo maanta ansixiyey sharciga Isgaarsiinta dalka
Muqdisho(RBC Radio) Xildhibaanad aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga isgaarsiinta dalka kaasoo horay ay u meel-mariyeen gollaha shacabku. Wasiirka Boostada,Isgaarsiinta iyo Tiknoloojiyada Eng, Cabdi Cashuur Xasan ayaa maalintii sabtida horgeeyey aqalka sare sharciga Isgaarsiinta dalka,iyagoona labadii maalmood ee u dambeysay ka doodayey sharciga. 40 senator oo goobjoog ka ahayd kulanka ayaa […]